रेडियो ताप्लेजुङ डा. भोला रिजालको टिप्सः मासिक स्रावको बेला असाध्यै पेट दुखेमा के गर्ने ?
डा. भोला रिजालको टिप्सः मासिक स्रावको बेला असाध्यै पेट दुखेमा के गर्ने ?
असोज १९ गते । विशेष गरि प्रजनन् उमेरका महिलामा यस्तो समस्या आउने गर्छ । १३-१४ वर्ष पुगेको केटी मोन्छेको ग्लान्ड उत्पन्न हुन्छ । जुन ओभरीले ग्रहण गर्छ ।
यस्तो ग्लान्डलाई कन्जुम गरेपछि वाठेघरले स्ट्रेजोजन हर्मोन उत्पादन गर्छ । अनि प्रोजेस्टेरोन हर्मोनले काम गर्न थाल्छ । अनि ती महिलामा डिम्ब निस्कने काम हुन्छ ।
डिम्ब निस्कने क्रममा पाठेघरभित्र इन्डोमेट्रियम हुन्छ । जहाँबाट रजश्वला हुन्छ ।
इन्डोमेट्रियमले स्ट्रोजन हर्मोन बढाउने काम गर्छ । जव डिम्ब निस्कन्छ अनि प्रोजेस्टोरेनले काम गर्छ । यदि महिला गर्भवति छ भने त्यस्तोउसमयमा रक्तश्राव हुँदैन । तर, गर्भवति नभएको अवस्थामा यस्तो अवस्थामाा मानिसलाई पेट दुख्ने काम गर्छ ।
बढी पीडा किन हुन्छ रु
मासिक श्रावको समयमा कसै(कसैलाई अलि कम दुख्छ भने कसै अत्याधि । यस्तो हुनुमा महिलामा भएको पाठेघरको आकारमापनि निर्भर गर्छ ।
पाठेघरभित्र जुन रजश्वला हुने ग्रन्थी हुन्छ, त्यहाँभन्दा भित्र पनि अर्को भाग हुन्छ( मायोनेटियम । यो इन्डोमेट्रियमको भित्री भागमा भएको ग्रन्थी हो ।
यसले पनि महिनावारीमा भुमिका खेलिरहेको हुन्छ । महिनावारीको समयमा मायानेटियमबाट पनि रक्तश्राव हुन्छ । तर, यहाँबाट बगेको रगत वाहिर निस्कदैन । त्यो रगत पाठेघरमै जमेर बस्छ । जसको कारण अत्याधिक पीडा हुने गर्छ । यहाँबाट जति बढी रगत बग्यो त्यति धेरै पीडा हुने गर्छ ।
अति नै पीडा हुन्छ भने त्यसको लागि चिकित्सकसँगै जाँच गर्न जरुरी हुन्छ । यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा लिएर हेलचक्र्याई गर्नु हुँदैन ।
दुखाई ठिकठिकै भएमा त्यति चिन्ता लिनु पर्दैन । सामान्य औषधीको प्रयोग बाट पनि ठिक हुन्छ । तर, कतिपय मानिस यसकै कारण फेन्ट हुने, स्कुलरकलेज जानै बन्द गर्ने पनि गर्छन् । यस्तो समस्यमा भएमा डाक्टरसँग सम्पर्क गरेर उपचारमा जुट्न जरुरी हुन्छ ।
– यस्तो दुखाईमा अन्य शारिरिक समस्याले पनि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । खासगरि पाठेघरको संक्रमण, माानशीक अवस्थालगायतकका कारण पनि महिनावारीको समयमा अलि बढी पेट दुख्ने गर्छ । त्यसैले उचीत कारण थाहा पाउनका लागि सम्बन्धित चिकित्सकसँगै परामर्श गर्न जरुरी हुन्छ ।